Izinto eziphambili uya kufika amava Florence izitalato enomtsalane kwaye iFlorence Cathedral eyaziwa njengehlabathi okanye iDuomo do Firenze. Xa ucinga ukuba, Florence iba yindawo enomtsalane bonke abahambi.
Xa ufika wasePadua, Qinisekisa ukuba utyelele iziko isixeko Prato della Valle. Kuyinto enye Izikwere eziphambili zedolophu, kwaye uzaliswe eqingqiweyo eqaqambileyo umntu akakwazi ngoyaba.
Uyakwazi ukufikelela iidolophu eziliqela kunxweme chibi Venice. kunjalo, Siva ukuba olona hambo lusuku luphambili ukusuka eVenice ukuya eLake Garda kufuneka lubandakanye iidolophu zasePeschiera naseSirmione. Fika kwindawo oya kuyo kunye Lake Garda, ungakwazi ukuthatha enye oololiwe eziliqela ukuba yonke imihla ikhefu Venice.